Vivid Vision, Voice and Value: 2017
राजा महेन्द्र कानो छ भन्दा
अहिले म कुरा बुझ्दैछु । म त्यतिबेला पदेसी रहेछु । अर्थात मदेसमा बस्ने पहाडी । पहाडबाट मदेस झरेको पहाडी । त्यसैले मधेसमा मलाई सबैले पहडिया भन्थे र मपनि उनिहरुलाई निर्धक्क मदेसी भन्थेँ । तर त्यहाँ न कुनै रीस हुन्थ्यो, न राग हुन्थ्यो न त कुनै वैरभाव नै हुन्थ्यो । बरु अँगालो हालेर मदेसी र पहाडी बोली बोल्दा आत्मियतामा अझ बृद्धि हुन्थ्यो । दिनभर स्कुलमा या खेत चहुर, पोखरी या खलिहान अनि बाग (आँपको विशाल बगैँचा) मा सँगै हुन्थ्यौँ । तर त्यतिबेला म पहाडीको पहाडी नै रहेँ र त्यहाँबाट पहाडी नै भएर निस्किएँ । अहिले पो आभास हुन थाल्यो म त त्यतिबेला दुबै रहेछु अर्थात पदेसी । मदेसीपनि र पहाडीपनि ।
खासमा माथिको घटनाहरु जनकपुर तथा लुम्बिनी अँचलका विभिन्न गाउँहरुमा बस्दाको अनुभूति हो । बुवाको जागिर नापीमा थियो । जागीर अनौठो प्रकारको थियो । अहिले अचम्म लाग्छ । तर त्यतिखेर यसप्रति कहिल्यै ध्यान पुगेन ।
हरेक हिउँदमा शहरबाट हामी गाउँ पस्थ्यौँ । नापीकोलागी । प्रत्येक गाउँमा एक महिनाको बसाई हुन्थ्यो । मेरो बुवा अन्य पाँचसात जना अमीन र टोलीप्रमुखको जत्थामा सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । यो टोलीको काम प्रत्येक गाउँमा गएर नापी गर्ने हुन्थ्यो । र वर्षा लागेपछि शहर फिर्ता आईन्थ्यो र हिउँद नलागेसम्म जनकपुर या बुटवलमा नै बसिईन्थ्यो ।
यसरी प्रत्येक गाउँमा नापीकोलागी बस्दा म त्यहि गाउँको स्कुलमा पढ्न जान्थेँ । न भर्नाको कचकच न फिसको । काठमाण्डुबाट आएको सेतो छाला भएको पहडिया, त्यसमाथि अमीन सापको छोरो भएकोले असाध्य मानमनितो र माया पाईन्थ्यो । भनि रहनु परेन मेरो उमेरपनि सानै थियो । यि सबैको सँयोजनले गर्दा म ति जुनजुन गाउँमा गएपनि पुल्पुलिएको हुन्थेँ ।
एउटा गाउँमा पसेर झिटी गुण्टा राम्रोसँग फुकाउन नपाउँदै अर्काे गाउँमा जानकोलागी झिटीगुण्टा बाँध्ने समय भईसक्थ्यो । एक महिना बित्न कति नै लाग्दो रहेछ र? यदि प्रतिक्षा नगर्ने हो भने । तर म भने यस गाउँको अपनत्व अर्काे गाउँमा पस्ने बित्तिकै बिर्सिसक्थेँ । तिनिहरुप्रति म निर्घिणी हुनाको कारण चाहिँ शायद म सानै भएकोले होला । तर मेरो बुवाआमा भने पछिसम्मपनि छोडिएका ति गाउँहरुका कुरा गर्नुभएको सुन्ने गर्थेँ ।
हरेक महिना एक स्कुलबाट अर्काे स्कुल सर्ने क्रममा एकपटक जनकपुरबाट पूर्व पर्ने एउटा गाउँ तथा रेल्वे स्टेशन समेत भएको महिनाथपुरमा भएको घटना अझै ताजै छ । अन्य गाउँमा जस्तै त्यस गाउँकोपनि स्कुल गएँ । कुन कक्षा भने सम्झना छैन । म शायद आठ नौ वर्षको हुँदो हुँ । स्कुलको त्यस कक्षाको ब्ल्याकबोर्डमाथि तत्कालिन राजा महेन्द्रको फोटो झुण्ड्याईएको थियो । एकदिन विषय र सन्दर्भ सम्झना छैन तर पढाउने गुरुले महेन्द्रको फोटो देखाउँदै यो राजा कानो छ भने । किन हो मलाई त्यो भनाई सह्य भएन । मैले त्यस गुरुसँग हाम्रो राजालाई किन कानो भनेको? भनेर बाझ्न थालेँ । उनले पहिले मलाई सम्झाउन थाले । म शिक्षकसँग बाझेको देखेर सारा कक्षा स्तब्ध भयो । गुरुसँग त्यसरी बाझ्नु सामान्य घटना थिएन । त्यसको सजायँ सबैले अनुभूत गर्न सक्ने थियो । तर मलाई गुरुले छुने त के हप्काउने आँट सम्म गरेनन् । अहिले सम्झँदा यसका दुई कारण हुन सक्छन् । पहिलो म गोरो छाला भएको अमीनको पहाडी छोरा र दोश्रो, महेन्द्रको पक्षमा मैले बोल्नु र त्यसको विपक्षमा शिक्षक जानु भनेको पँचायत र महेन्द्रको उत्कर्षको समयमा आफैलाई समस्यामा होम्नु जत्तिकै थियो होला । अन्यथा जनकपुरमा पाठ बुझाउन नसकेर कैयौँ पटक लठ्ठिको स्वाँठ खाएको मैले त्यहाँपनि सजिलै कडा सजाय पाउन सक्ने थिएँ । तर मलाई केहि गरिएन ।
गाउँगाउँको भ्रमणले म अवधि र मैथिली भाषा राम्रै बोल्न सक्ने भएको थिएँ । यहाँसम्म कि घरमा जग्गाजमीनको समस्या लिएर आउने स्थानिय मधिसेहरु र बुबाको बिच दोभाषेको काम समेत गरिदिन्थेँ । उनिहरु गएपछि घरमा नेपाली नै बोलिन्थ्यो । घरबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै स्थानिय भाषा विशेष गरी अवधि या मैथिली बोल्ने गर्थेँे ।
यसरी सर्ने क्रममा हामी जनकपुरको डाँकुहरुको नामुद गाउँ झिँझापनि पुग्नु पर्ने भएको थियो । यो गाउँ डाँकुहरुको गाउँ थियो । वरपरका गाउँहरु या सिमापारी समेत गएर डकैती गर्नेहरुको त्यो बस्ती झिँझा नामले प्रख्यात थियो र यो नामबाट जोपनि त्रसित थिए । तर, जागिरको क्रममा बुवाहरुको टोलीपनि सोहि गाउँमा जानु पर्ने भएकोमा मेरो बुवा त्रसित हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण, बुवाले आफुलाई नजिकको अर्काे गाउँमा जाने पारेर यो गाउँ छल्नु भयो । तर, दुरी भने खास्सै टाढा नभएकोले हाम्रो परिवार लगायत अन्य अमीन टोलीका परिवारहरु त्रसित नै रहन्थे ।
तर, जब त्यस गाउँको नापी सकिएर अर्काे गाउँ जाने समयमा ति झिँझा गाउँका डाँकु भनिनेहरुले त्यस गाउँमा कार्यरत अमीनहरुको विभिन्न उपहार दिएर भब्य बिदाई गरेको सन्दर्भ हाम्रो परिवार र बुवाका साथीहरुमा पछिसम्मपनि चलिरहेको म सम्झन्छु ।
यहि क्रममा मैले केपनि देखेको छु भने गाउँगाउँमा ठुलाबडा भनाउँदा जमिन्दारहरुले गरीबहरुप्रति गरेको शोषण । त्यतिबेला मैले यहि हो भनेर अनुभूत नगरेपनि अहिले सम्झँदा ति हरवाह चरवाह भजाउँदाहरुले मालिकले पकाएको भातको माड र मालिकको घरबाट मारिएको मुसा खाएर आफुलाई धन्य ठान्ने विचराहरुप्रति ति धनि जमिन्दारहरुबाट शोषण पक्कै गरिएको हो । मलाई लाग्छ तिनै जमिन्दारहरु अहिले मधिसेको हकहितकोलागी आवाज उठाएर आन्दोलन गर्दैछन् । समय परिस्थिति अनुसार ति हरवाह चरवाहहरुप्रति व्यवहार फेरिएको भए बेग्लै कुरा । तर यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन भनेर ठोकुवा गर्न नसकेपनि आशँका चाहिँ पक्कै छ । त्यसकारण तराई मधेशकोलागी भएको यो आन्दोलन नेता भनाउँदाहरुकैलागी या सिमित वर्गकोलागीमात्र हो भन्दा केहि फरक पर्दैन । हालै भएको प्रदेश २ को निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरुको पराजयलेपनि यहि जनाएको छ ।
यसरी अधिकाँश समय जनकपुरमा नै बसोबास गरेको मैले त्यहिँबाट २०३२ सालमा एसएलसी दिएको केहि महिनामा नै बुवाको सरुवा रौतहटको सदरमुकाम गौर सरुवा भयो र मपनि त्यतै लागेँ । यसरी २०३३ सालको जेठ महिनादेखि २०३८ साल जेठ महिनासम्म गौरको बासिन्दा रहँदा भएँ । यसर्थमा म २०२४ सालमा तराई झरेर २०३८ सालसम्म पदेसी हुँदा भएँ ।
Written & posted by मेरो विचार at 4:01:00 PM No comments: